WAR DEG DEG AH: SAWIRRO: Dowladda Puntland oo soo tarxiishay maxaabiis looga shakisanaa Shabaab iyo tahriibayaal lagu qabtay Garowe. halkee loo tarxiilay? – Puntland News.net
Home 2017 February 10 Somali News WAR DEG DEG AH: SAWIRRO: Dowladda Puntland oo soo tarxiishay maxaabiis looga shakisanaa Shabaab iyo tahriibayaal lagu qabtay Garowe. halkee loo tarxiilay?
WAR DEG DEG AH: SAWIRRO: Dowladda Puntland oo soo tarxiishay maxaabiis looga shakisanaa Shabaab iyo tahriibayaal lagu qabtay Garowe. halkee loo tarxiilay?
February 10, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Dowladda Puntland ayaa dhulkeeda kasoo masafurisay maxaabiis looga shakisanaa Alshabaab inay katirsan yihiin, kuwaas oo dhawaan lagu qabtay howlgallo kala duwan oo laga sameeyay magaalada Caasimadda ah ee Garowe.
Baaritaan kadib ayaa maxaabiistaan loosoo tarxiilay dhinaca Galmudug, kadib markii lagu eedeeyay inay si sharci darro ah kusoo galeen gudaha Puntland, qaarkoodna ay ahaayeen tahriibayaal doonayay inay doon ka raacaan magaalada Bosaso iyadoo kusii jeeday Yemen.
Dowladda Puntland ayaa dagaal xoogan kula jirta Alshabab iyo Daacish, waxayna ilgaar ah ku haysaa dadka kasoo safraya gobolada konfureed ee Soomaaliya, kuwaas oo inta badan loo xagliyo inay yihiin kuwa loo adeegsado falalka argigixisada ee argigixisadu soo maleegaan.